Isbedelka cimilada - BBC News Somali
Posted at 17:16 15 Sebtembar 202117:16 15 Sebtembar 2021
Dal lo'da u tababarayo qaab ay suuliga u isticmaali karto
Lo'du waxay noqon kartaa kuwa loo tababbaro musqusha si loo yareeyo qiiqa gaaska ee sii kordhaya, ayay cilmi -baarayaashu sheegeen.
Posted at 9:18 15 Oktoobar 20209:18 15 Oktoobar 2020
Muxuu yahay geedkan 300 sano jirka ahaa ee laga jaray Puntland?
Geedkan ayaa la sheegayaa in manaafacaad badan uu u lahaa xoolaha iyo dadka deegaanka oo har iyo hunguriba ka heli jiray muddadii uu halkaasi ku yaalay balse hadda uu jaray nin dhuxul doon ah oo hadda xabsi ku jira.
Posted at 11:18 21 Maajo 202011:18 21 Maajo 2020
Dadka ka barakacay dhibaatooyinka ka dhashay isbaddallada cimilada sida fataahadaha iyo duufaannada waxay xaalaaddu ku khasabtay in aysan u hogaansamin kala fogaanshaha bulshada, sida laga soo xigtay ha'yadaha gargaarka.
Posted at 18:15 20 Maarso 202018:15 20 Maarso 2020
New Zealand ayaa qof ahaan u aqoonsatay Webiga Whanganui.
Posted at 8:19 17 Jannaayo 20208:19 17 Jannaayo 2020
Maxay yihiin dhibaatooyinka naga soo gaaray Isbadelada cimilada?
Video caption: Maxay yihiin dhibaatooyinka naga soo gaaray Isbadelada cimilada?Maxay yihiin dhibaatooyinka naga soo gaaray Isbadelada cimilada?
Posted at 14:59 2 Disembar 201914:59 2 Disembar 2019
Nibirigii soo caariyay oo calooshiisa laga helay qashin badan
Shabaqyada lagu kalluumeysto iyo xargo ayaa ka mid ahaa qashin 100kg ah oo laga helay nibirigan calooshiisa.
Posted at 12:39 10 Oktoobar 201912:39 10 Oktoobar 2019
"Waxaan rabnaa inaan saddex maalmood si khasab ah ku xirno garoonka diyaaradaha ee London"
Mid ka mid ah dadka ka mudaharaada isbaddalka cimilada ayaa xayiray diyaarad wakhtigeedii duullimaadka la gaaray.
Posted at 15:58 25 Sebtembar 201915:58 25 Sebtembar 2019
Gabadha Ilhaan Cumar oo Farriin culus u dirtay Trump
Waxay Isra Xirsi ka mid tahay da'yarta hoggaamineysa ololaha lagu dalbanayo in wax laga qabto isbedelka cimilada adduunka.
Posted at 2:59 23 Sebtembar 20192:59 23 Sebtembar 2019
Maxaa sababay isbeddelka cimillada sii kululaanaysa?
alaamadaha iyo saameynta kuleylka adduunka ayaa si xooggan kor ugu kacaya, tijaabadii ugu dambeysay ee ku saabsan isbeddelka cimillada, ayaa la daabacay ka hor shirka lagaga hadlayo ee muhiimka ah ee Qaramada Midoobay ee ka dhacaya New York.
Posted at 13:55 20 Sebtembar 201913:55 20 Sebtembar 2019
Sawirro: muddaharaadyada isbeddelka cimilada caalamka ka dhacay
Mudaharaadayaasha waxay dalbanayaan "in la helo cimilo caddaalad ku dhisan" oo dadka oo dhan deeqda.